iPhone 5S တစ်ချို့မှာ Battery ပြဿနာ ရှိကြောင်း Apple ၀န်ခံ ~ The ICT.com.mm Blog
iPhone 5S တစ်ချို့မှာ Battery ပြဿနာ ရှိကြောင်း Apple ၀န်ခံ
iPhone 5S အသုံးပြုသူတစ်ချို့ မှာ Battery အကုန်မြန်တဲ့ ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ Apple ကလည်း အဲဒီ ပြဿနာ ဟာ iPhone 5S တစ်ချို့မှာ အမှန်တကယ် ရှိနေတာကို ၀န်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံ က ပြဿနာ ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး iPhone 5S အနည်းငယ်သာ အဲဒီ ပြဿနာဖြစ်တာဖြစ်ပြီး အလုံးရေ ထောင် ဂဏန်း လောက် မှာ အဲဒီ ပြဿနာ ရှိနေတယ်လို့ Apple ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ က ပြောကြားပါတယ်။ အဲဒီ ဖုန်းတွေဟာ Battery အားသွင်းရင် အလွန်ကြာတတ်ပြီး အသုံးပြုရင်လည်း အားကုန်တာမြန်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီ ဖုန်းတွေကို Apple က အခမဲ့ လဲလှယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Newer မြန်မာနိုင်ငံက ပထမဆုံးအကြိမ် အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပသည့် အာဆီယံနိုင်ငံ တပ်မတော် (ကြည်း) များသေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲစတင်
Older iPhone 5S ရဲ့ Touch ID Fingerprint Sensor ကို အသုံးပြုနည်း ငါး နည်း
Appleရဲ့ ချပ်၀တ်တန်ဆာကွန်ပြူတာ (Wearables) ဈေးကွက်သို့ ဦးတည်မယ့် iPhone ကြော်ညာ
Appleက 2014 Worldwide Developer Conferenceနဲ့ အတူ iPhone 5Sကြော်ညာကို ထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြော်ညာမှာ iPhoneဟာ ချပ်၀တ်တန်ဆာ ကွန်ပြူ...
မီးချောင်းသားရေဖြင့် ချုပ်လုပ်ထားသည့် iPhone Bumper ကို ဒေါ်လာ (၁၀, ၀၀၀) ဖြင့်ရောင်းချ
Gresso က iPhone5နဲ့ iPhone 5S တို့အတွက် တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး Accessory များကို ဒေါ်လာ (၁,၀၀၀) နဲ့ (၁၀,၀၀၀) ကြားမှာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနေ...
Samsung Galaxy S5 Vs Apple iPhone 5S ဘယ်ဖုန်း ပိုကောင်းလဲ?
Samsung က Galaxy S5 ကို ထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ Galaxy S5 ကို ၀ယ်ရမလား iPhone 5S ကို ၀ယ်ရမလား စဉ်းစားရ ခက်နေရင် ဒီဆောင်းပါးမှာ အဖြေရှာ...
Apple က iPhone 5S Handset သီးသန့်ရောင်းပြီ
Mobile Carrier တွေရဲ့ SIM Card တွေကို ၀ယ်ယူစရာမလိုတဲ့ Unlocked iPhone တွေကို Apple က အမေရိက မှ Apple Online Store တွင် စတင်ရောင်းချပေးလ...
iPhone 5S ရဲ့ Touch ID Fingerprint Sensor ကို အသုံးပြုနည်း ငါး နည်း
iPhone 5S မှာ ပါတဲ့ Touch ID ဟာ သင့် iPhone ကို Unlock လုပ်ဖို့အတွက် အရင် အသုံးပြုနေကျ 4-digit PIN code တွေကိုအသုံးပြုစရာမလိုဘဲ သင့် လက...
iPhone 5Sရဲ့ Touch IDကို နို့သီးခေါင်းနဲ့ပါ သုံးပြ
Appleရဲ့ Touch IDပါ၀င်ပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ iPhone 5Sဟာ လူရဲ့ နို့သီးခေါင်းနဲ့တောင် Lockလုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ဗီဒီယိုနဲ့တကွ ထွက်ပေ...
iPhone 5Sရဲ့ လက်ဗွေစနစ်ကို ဥရောပ Hackerအဖွဲ့ တစ်ခုက လက်တွေ့Hackပြ
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘာလင်မြို့ အခြေစိုက် ဥရောပ Hackerအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Chaos Computer Club”ကနေ အသစ် ကျပ်ချွတ် iPhone 5Sရဲ့ Fingerprin...
iPhone 5Sရဲ့ လက်ဗွေစနစ် Hackနိုင်တဲ့လူ ဒေါ်လာ သောင်းခြောက်ထောင် ရမည်
အမေရိကန်အခြေစိုက် ကမ္ဘာကျော် နည်းပညာ Appleမှ မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိ လိုက်တဲ့ iPhone 5Sမှာ ပါ၀င်လာတဲ့ Fingerprint Scannerကို Hackလုပ်နိုင်တဲသူအ...
Appleရဲ့ iPhone 5Sက လူစိတ်၀င်စားမှု နံပါတ်တစ် ဖြစ်နေ
အမေရိကန် အခြေစိုက် ကမ္ဘာကျော် နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး Appleမှ တရား၀င်မိတ်ဆက် လိုက်သော iPhone 5Sမှာ GSM ARENA၀က်ဘ်ဆိုဒ်၏ နေ့စဉ် လူစိတ်၀င်စားမ...
iPhone အသစ်တွေ ၀ယ်သင့်၊ မ၀ယ်သင့်? iOS 7ကို မြှင့်သင့်၊ မမြှင့်သင့်?
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၀ရက်နေ့က ကမ္ဘာကျော် နည်းပညာကုမ္ပဏီ Appleဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ iPhoneအသစ် နှစ်မျိုးနဲ့ OSအသစ် ဖြစ်တဲ့ iOS 7ကို မိတ်ဆက်ကြေည...
ယခုနှစ် စက်တင်ဘာ လကုန်ပိုင်းလောက်မှ ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ iPhone 5ကို မြန်မာပြည်မှာလည်း တခဲနက် အားပေးခဲ့ကြသည့်အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံတကာမှ iPhon...